Mobile Legends - Onepay (Myanmar) - Codashop
Mobile Legends - Onepay
ထုတ်ကုန်များ ⇒ Twilight Pass, Starlight Member
Mobile Legends စိန္ဝယ္ in seconds! သင်၏ Mobile Legends user ID ဖြည့်ပါ၊ သင်ဝယ်လိုသော Diamonds ပမာဏကို ရွေးချယ်ပါ၊ ငွေပေးချေမှုကို ဆောင်ရွက်ပါ၊ ထို့နောက် သင်၏ MLBB အကေငာင့်တွင်း ဝယ်ယူထားသည့် Diamonds ချက်ချင်း ဝင်ရောက်လာမည် ဖြစ်သည်။
မိမိ စိတ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ငွေချေစနစ် Onepay.တွေနဲ့ ပေးချေလိုက်ပါ။ Credit ကတ် ၊ မှတ်ပုံတင်ခြင်း နှင့် Login ဝင်ရခြင်း စသဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်မလိုပါ!
Download & play Mobile Legends: Bang Bang today!
1 အသုံးပြုသူ ID ထည့်သွင်းပါ
2 ငွေဖြည့်သွင်းမည် ကိုရွေးချယ်ပါ
3 ငွေပေးချေမှု ရွေးရန်
သင့် အကြံပြုချက်ကို တန်ဖိုးထားလျက်ရှိပါတယ်!
Myanmarနိုင်ငံအတွက် Codaမှ နောက်ထပ် ငွေချေစနစ်များ ထည့်သွင်းပေးသွားဖို့ စီစဥ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေပါတယ်! Codashopမှာ သင်အသုံးပြုလိုတဲ့ ငွေချေစနစ်ကို ပြောပြပေးပါ။
Pay with Onepay
အခု ဝယ်မည် အခု ဝယ်မည်
Codashop - မြန်မာနိုင်ငံတွင် Mobile Legends Diamonds ၀ယ်ရန် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်း။
Mobile Legends ရဲ့ စိန်တွေကိုဝယ်ယူမယ်ဆိုရင် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းသာကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ စိန်တွေနဲ့ Starlight Member အပြင် Twilight Pass တွေကိုပါရယူနိုင်ပြီး Champions တွေကို Unlock ဖြည်နိုင်မယ့်အပြင် Champion Skin တွေနဲ့ တစ်ခြားသော အရာတွေကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ Codashop ကိုအသုံးပြုရတာလွယ်ကူမြန်ဆန်စေပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာအပါအဝင်အရှေ့တောင်အာရှာမှာရှိတဲ့ ဂိမ်းကစားသူတွေရဲ့ အယုံကြည်ရဆုံးရောင်းချသူတစ်ယောက်အဖြစ်တည်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်မလို ၊ စာရင်းသွင်းစရာမလို ၊ Login ဝင်စရာမလိုတာကြောင့် အခုပဲ စိန်ဝယ်ယူဖို့ အတွက်ဒီနေရာကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်။
မိုဘိုင်းဒဏ္ဍာရီဂိမ်းအတွင်း၌ အခြားကစားသူများနှင့်အပြိုင် 5v5 MOBA ပြိုင်ပွဲအဖြစ် သင်၏ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူ ပါဝင်လိုက်ပါ။ သင့်စိတ်ကြိုက် သူရဲကောင်းများကို ရွေးချယ်ပြီး သင်၏ ရဲဖော်ရဲဖက်များနှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံသော အဖွဲ့တစ်ခု တည်ထောင်လိုက်ပါ။ ကစားပွဲတစ်ခုရှာဖွေရန် ၁၀ စက္ကန့်သာကြာပြီး ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပြီးရန် ၁၀ မိနစ်သာကြာမည် ဖြစ်သည်။ လမ်းထိမ်းခြင်း၊ တောတိုးခြင်း၊ လမ်းတွန်းပြီး တာဝါချိုးခြင်း၊ အဖွဲ့လိုက် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်း စသော PC MOBA များနှင့် အတိုက်အခိုက် ဂိမ်းများမှ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာအားလုံးကို သင့်လက်ဖဝါးပေါ်တွင် ရယူနိုင်ပါပြီ။ သင်၏ eSports စိတ်ဓာတ်များကို ထုတ်လွှင့်လိုက်ပါ။
စျေးကွက်နှင့်မိတ်ဖက်များ စည်းမျဉ်းဥပဒေများ သတင်းအချက်အလက်လုံခြုံမှု မူဝါဒ